Geofumadas - यस डिजिटल क्षण को प्रवृत्तिको बारेमा - Geofumadas
घर/मेरो egeomates/Geofumadas - यस डिजिटल क्षणको चलनहरूमा
कसरी जाँदै छ डिजिटल तपाईंको ईन्जिनियरिंग चुनौतिहरू उल्टाउन सक्छ
जडित डाटा वातावरणले मात्र यसको बारेमा कुरा गर्दैन, तिनीहरू तपाईंको निर्माण परियोजनाहरूमा सडक पनि हिड्दछन्।
लगभग सबै ईन्जिनियरि,, वास्तुशिल्प, र निर्माण (AEC) पेशेवरहरू मार्जिन बढाउन र तिनीहरूको व्यवसायमा जवाफदेहिता कम गर्न नयाँ तरिकाहरू खोज्नमा केन्द्रित छन्। किनकि टेक्नोलोजी यति चाँडो बढ्दछ, यो गाह्रो हुन सक्छ किनकि त्यहाँ जानकारीको धेरै स्रोतहरू उपलब्ध छन्। यो प्रयोग गर्न समय बनाउने मामला भयो।
तर यो हाम्रो दैनिक बजारमा कसरी सम्बन्धित छ? मेरो एक सहकर्मीले एक मालिक-अपरेटर ग्राहकबाट एक धेरै चाखलाग्दो ईमेल प्राप्त गर्यो:
“हामीसँग सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको ठेक्का दिने समयमा ठेकेदारहरूले कुरा गरेको देखिन्छ, तर आयोजना टोलीहरूको प्राथमिकता नभएकाले कार्यान्वयन रोकिन्छ। एक मालिक विकासकर्ताको रूपमा, हामी एक आविष्कारक हुन चाहन्छौं र ठेकेदारहरूसँग साझेदार बन्न चाहन्छौं जो वास्तवमै प्रारम्भिक अपनाउने र डेलिभर गर्ने क्षमता हुनेछन्।
यो निर्धारण गर्न गाह्रो छ कि यी दिन कुन आविष्कारले प्रस्ताव गर्दछ। के यो डाटाको टेराबाइट हो, जुन ग्राहकलाई डेलिभर गरिएको छ ऐतिहासिक डाटा वा मेटाडेटा बिना नै? छविहरूको साथ एक मूल उपकरण निर्माताको म्यानुअल; वा रेखाचित्रहरू र डाटा जुन अन्तर्निहित / अन्तिमको रूपमा आपूर्ति गरिएको सम्पत्तिसँग मन्जूरी हुन सक्दैन?
एक संयुक्त प्रणाली, जस्तै प्रोजेक्टवाइज र एसेटਵਾਈिज, कुनै पनि प्रकारको परियोजनाको सम्पत्ति मालिकको लागि आवश्यक छ। मैले यस श्रृ series्खलाको लेख3र in मा छलफल गरेझैं (कसरी सत्यको एकल स्रोतले पूर्वाधार डिजाइन उद्योगलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ र किन तपाईंलाई क्रमशः डिजाइन प्रक्रिया सुधार गर्नु आवश्यक छ), यो भन्दा ढिलो हुनु अघि प्रणाली समावेश गर्नु उत्तम हो।
त्यहाँ बजारमा धेरै प्रणालीहरू छन्, र त्यहाँ सबै फिट हुने कुनै पनि छैन। उदाहरणका लागि, यदि तपाईंसँग ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू छन् भने, तपाईंले स्थिरतालाई विचार गर्न आवश्यक छ। तपाईं समस्यालाई डिजाइनबाट निर्माणदेखि सञ्चालनमा लैजान चाहनुहुन्न। मसँग काम गर्ने धेरै ग्राहकहरूले यो समस्यालाई पूर्ण रूपमा फरक कोणबाट हेरिरहेका छन्। तिनीहरू यसलाई "समस्याको रिभर्स इन्जिनियरिङ" भन्छन्।
यदि तपाईं छोटो अवधिको जीतको लागि मात्र खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं धेरै डार्क डाटा सिलोको साथ समाप्त हुनुहुनेछ, जुन समस्याहरूको अर्को सेट हो। एक ग्राहकको रूपमा, तपाइँ तपाइँको प्रोजेक्ट पूर्ण BIM अनुरूप भएको चाहनुहुन्छ।
मालिक अपरेटरहरूले आफैलाई यी तीन प्रश्नहरू सोध्छन्:
सम्पत्ति प्रबन्ध गर्न मलाई के चाहिन्छ, विशेष गरी यो परियोजना जीवन चक्रको सब भन्दा लामो समयदेखि नै?
मलाई निर्माणको लागि के आवश्यक छ, र जे सम्पत्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ?
मलाई डिजाईन र सम्भाव्यता अवधिको लागि के चाहिन्छ, र त्यो परियोजना प्रबन्धन सफ्टवेयरसँग सम्बन्धमा छ?
त्यहाँ पुग्न तपाईंलाई सीडीई चाहिन्छ: जडिएको डाटा वातावरण,
यो साझा डाटा वातावरण होईन।
दुबै प्रणालीहरूले प्रोजेक्टमा डाटा आदान प्रदान गर्छन्, तर जडित डाटा वातावरण (CDE) मात्र मिल्दो सत्य स्रोत हो। सीडीईले परियोजनाको जीवन भर डाटा व्यवस्थापन, फैलाउने, स collect्कलन र भण्डारण गर्दछ। यो उपयोगी जीवन मान्छेले सोचे भन्दा धेरै लामो हुन सक्छ, विशेष गरी जब तपाईं नविकरणको स consider्ख्यालाई सम्झनुहुन्छ एक सम्पत्ति 30०-बर्ष अवधिमा जान सक्छ। सामान्यतया, BIM ले सुनिश्चित गर्दछ कि सबै सही जानकारी सही ढाँचामा उपलब्ध छ, टोलीलाई एक सम्पत्ति को जीवन भर सही छनौट गर्न अनुमति दिदै। गलत धारणा, विशेष गरी शुरुका दिनहरू, जुन बिम एक स्वतन्त्र थ्रीडी मोडल सिर्जना गर्ने बारेमा थियो। यो सत्य होइन। यसको सट्टामा, BIM अनिवार्य रूपमा एक परियोजना सेट अप र चालुको तरीका हो।
BIM केन्द्र मा एक प्रमुख दायित्व छ: रोजगारदाता जानकारी आवश्यकताहरु। यी आवश्यकताहरूले जानकारी परिभाषित गर्दछ जुन रोजगारदाताले सम्पत्ति कार्यान्वयन गर्न विकसित गर्न चाहन्छ। नियोक्ताले सुरुमा ठेक्का कागजात स्थापना गर्दछ, यो सुनिश्चित गर्दै कि उपयुक्त जानकारी सिर्जना गरिएको छ र प्रणालीहरू सबै प्रोजेक्ट भर प्रयोग गरिन्छ।
जब हामी सीडीईको बारेमा कुरा गर्छौं, अर्को शब्द हामीले परिभाषित गर्नुपर्दछ डिजिटल जुम्ल्याहा, जुन एक भौतिक सम्पत्ति, प्रक्रिया, वा प्रणालीको डिजिटल प्रतिनिधित्व हो, साथ साथै इन्जिनियरि। जानकारी जसले हामीलाई यसको प्रदर्शन बुझ्न र नमूना बनाउन सक्षम गर्दछ। सामान्यतया, सेन्सरहरू र निरन्तर सर्वेक्षण सहितको एकभन्दा बढी स्रोतहरूबाट एक डिजिटल जोडाहरू लगातार अपडेट गर्न सकिन्छ, यसको स्थिति प्रतिनिधित्व गर्न, कार्य अवस्था, वा निकट वास्तविक समयमा स्थिति। एक डिजिटल जुवा प्रयोगकर्ताले जेथा हेर्न, स्थिति जाँच गर्न, विश्लेषण प्रदर्शन गर्न, र मस्तिष्कको प्रदर्शनलाई भविष्यवाणी गर्न र सम्पत्ति प्रदर्शन अनुकूलन गर्न अनुमति दिन्छ।
एक डिजिटल जुम्ल्याहा अपरेशन र भौतिक सम्पत्तिहरूको रखरखाव अनुकूलन गर्नका लागि एक साधनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, साथै तिनीहरूको प्रणालीहरू र प्रक्रियाहरू। एक डिजिटल जोडाहरू बाट जानकारी विश्लेषण गरिएको छ, असंख्य पाठ सिक्न सकिन्छ, टीम को वास्तविक जीवन सम्पत्ति को अधिकतम मूल्य फिर्ता गर्न अवसर प्रदान गरेर।
सम्पत्तिको अपरेशनलाई असर नगरी उपकरणहरू मर्मत गर्न इष्टतम समय कहिले हो भनेर हेर्न डिजिटल सिमुलेसनहरूमार्फत पाठ सिक्न सकिन्छ। जब तपाईं सेन्सरहरू र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको थप गर्नुहुन्छ, तपाईं वास्तविक डाटा डेटा विश्लेषण र ऐतिहासिक डाटासँग यो डाटाको तुलना प्राप्त गर्नुहुन्छ।
डिसेम्बर 2018 मा सेन्टर फर डिजिटल बिल्ट ब्रिटेन द्वारा प्रकाशित जेमिनी सिद्धान्त अनुसार, डिजिटल जुम्ल्याहा "कुनै भौतिक कुराको यथार्थपरक डिजिटल प्रतिनिधित्व" हो। डिजिटल जुम्ल्याहालाई कुनै पनि अन्य डिजिटल मोडेलबाट अलग गर्ने कुरा भनेको भौतिक जुम्ल्याहासँगको सम्बन्ध हो। राष्ट्रिय डिजिटल जुम्ल्याहालाई "डिजिटल जुम्ल्याहाहरूको इकोसिस्टम जुन सुरक्षित रूपमा साझा डाटाद्वारा जडान गरिएको छ" भनेर परिभाषित गरिएको छ।
ईमेललाई फर्केर हेर्दा मेरो सहकर्मीले मालिक-अपरेटर ग्राहकबाट प्राप्त गरेको, यो स्पष्ट छ कि संगठनहरू एकल क्लाउड-आधारित प्लेटफर्ममा सकेसम्म धेरै स cons्कलन गर्न चाहन्छन्।
नक्कल जानकारीको स्थानीय सिलोहरू मात्र हटाइएको छैन, उनीहरूले प्रदर्शनको नयाँ गतिशील स्तरमा सूचना खोल्ने क्षमता पनि सिर्जना गर्छन्।
CDE हरू निर्माण उद्योगमा सबै भन्दा राम्रो अभ्यास र अनुबंध कार्यप्रवाह कुराकानी गर्न प्रमुख भूमिका खेल्छन्। यी डिजिटल कफलिंक्सको आधार हुन्।
किन खराब सञ्चार जानकारी जानकारी तपाइँको परियोजनाहरु लागत छ
निर्माण परियोजनाहरू अधिक जटिल हुँदै गइरहेका छन् र समाधान हो एक जडित डाटा वातावरण।
सहरको केन्द्रमा भर्खरको प्रोजेक्टमा ठूलो समस्या भएको एक विकासकर्ता साथीसँग पारिवारिक सप्ताहन्तमा बिताए पछि, परिस्थितिले मलाई सम्झौताहरू परिवर्तन भएको छ भनेर कसरी सोच्न बाध्य तुल्यायो र आगमन र उपलब्धताका कारण परिवर्तन हुनेछ। डाटा मेरो साथी र मैले सप्ताहन्तमा डिजाइन र निर्माण परियोजनाहरूको बारेमा कुरा गर्यौं। दृश्य सेट गर्न, यो निजी भाँडा क्षेत्र (PRS) योजना को मानदण्ड पर्याप्त सीधा थियो।
मेरो साथीको प्रोजेक्टमा सामान्य समस्याहरू पुन: कार्यको मात्रा र जिम्मेवारीको कारण हो किनकि त्यहाँ डिजाइन परिवर्तनका श्रृ .्खलाहरू थिए। यस प्रोजेक्टलाई दिमागमा राख्दै, मैले अनुसन्धान गर्न शुरू गरें कि उद्योगको पुन: काममा कति खर्च भयो।
यदि तपाईं केहि अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरू पढ्नुहुन्छ भने, यी रिपोर्टहरूले सुझाव दिन्छ कि टाढा पर्ने त्रुटिको प्रत्यक्ष लागतहरू परियोजना मूल्यको%% हुन्। समग्र बजारमा त्यो आंकडाको काम गर्दै, यो प्रतिशतले ब्रिटेनभरि प्रति वर्ष लगभग जीबीपी billion अर्ब (5.१ बिलियन) सम्म थप गर्दछ। जारी गरिएको आम्दानी चेतावनीको संख्यालाई ध्यानमा राखेपछि, यो मूल्य प्रीमियर बजारमा काम गर्ने अधिकांश ठेकेदारहरूको औसत आय स्तर भन्दा ठूलो छ।
२०१ Get मा गेट इट राइट इनिसिएटिभ (जीआईआरआई) द्वारा अनुसन्धानले आश्चर्यजनक रूपमा उच्च मूल्य देखाउँदछ। जीआईआरआई सिभिल इन्जीनियर्सको संस्थानको सर्वश्रेष्ठ अभ्यास प्यानलमा छलफलबाट बाहिर आयो। अप्रशिक्षित र अप्रत्यक्ष लागत समावेश गर्दा, जीआईआरआईले अनुमान गरेको यो लागत १०% र २%% बीचमा छ, लगभग प्रति वर्ष १०-२-2015 अरब जीबीपी (१२--10० अरब अमेरिकी डलर)।
जीआईआरआईको अनुसन्धानले त्रुटिको शीर्ष १० कारणहरू पहिचान गरे, जुन निम्न थिए:
ढिला डिजाइन परिवर्तनहरू
राम्रोसँग सूचित गरिएको जानकारी जानकारी
गुणस्तरको सम्बन्धमा नराम्रो संस्कृति।
खराब समन्वय गरिएको डिजाइन जानकारी
निर्माण डिजाइन मा अपर्याप्त देखभाल।
अत्यधिक व्यावसायिक दबाव (वित्तीय र समय)
खराब व्यवस्थापन र इन्टरफेस डिजाइन
टोलीका सदस्यहरू बीचको अप्रभावित सञ्चार।
अपर्याप्त सुपरिवेसरी सीपहरू
मैले डिजाइन प्रबन्धको विषय मनमोहक पाएँ। जीआईआरआईको अनुसन्धानले देखाए कि त्यहाँ समन्वित डिजाइनको अभाव छ, परिणामस्वरूप साइटमा डिजाइन कार्यालय र आपूर्ति श्रृंखला बीच झगडा भयो, जसले गर्दा कार्यमा ढिलाइ भयो, ढिलाइ भयो र लागत बढ्यो।
जे होस्, त्यहाँ GIRI रिपोर्टमा हाईलाइट गरिएका धेरै जसो समस्याहरूको सरल समाधान छ: क्लाउड-आधारित टेक्नोलोजी। प्रोजेक्ट वाइज र सिन्च्रो जस्ता प्रणालीहरूले यी समस्याहरू मध्ये धेरैलाई कम गरेर निम्न प्रदान गर्न सक्छन्:
एक सुरक्षित र सुरक्षित सहयोगी जलवायु जहाँ कागजातहरू, डिजाइनहरू, र मोडेलहरू मोबाइल उपकरणहरू प्रयोग गरेर साइटमा समीक्षा गर्न सकिन्छ, जस्तै सेल फोनहरू।
ट्र्याक गर्न क्षमता र निर्बाध रूपमा निश्चित गर्नुहोस् कि सही सामग्रीहरू कारखानाबाट सीधा साइटमा आउँछन्।
प्रणाली जसले चेकलिस्टहरू र क्रिस्टलीकरण प्रदान गर्न सक्दछ यो सुनिश्चित गर्न कि परियोजना सही दिशामा गइरहेको छ।
जहाँसम्म, हामीले बेंटलेको पछिल्लो अनुसन्धानमा देख्यौं (मेरो अघिल्लो लेखमा छलफल गरिएको अनौपचारिक सुविधामा गोइंग डिजिटल निर्माणको फाइदाहरू), यद्यपि, अधिकांश ठेकेदारहरूले यस प्रविधि आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्दैनन्। बेंटलेको सर्वेक्षणले पत्ता लगायो कि लगभग आधा कम्पनीहरू (.44.3 XNUMX..XNUMX%) का कम्पनी वा परियोजना प्रदर्शनको सीमित वा कुनै हेराई थिएन। यद्यपि आधा उत्तरदाताहरूले परियोजना डेटा स collecting्कलनको महत्त्व बुझेका थिए, तिनीहरू यसलाई डिजिटलीकरणको साथ धेरैजसो बनाउन असमर्थ थिए। प्रोजेक्टवाइज प्रणाली प्रयोग नगर्ने कम्पनीहरू हराइरहेका छन्:
कार्यप्रवाह र डिजाइनको द्रुत गर्दै
ईन्जिनियरहरू अनुमानित छन् कि उनीहरूको दिनको %०% सम्म जानकारी खोज्न वा फाइल डाउनलोडहरूको लागि प्रतिक्षा गर्न। कल्पना गर्नुहोस् जब सबैलाई सहि डाटामा छिटो पहुँच दिन र कहाँ उनीहरूलाई यो आवश्यक हुन्छ।
अराजकता बिना सहकार्य गर्दै
संचार रुकावटहरू कम गर्न एक जोडिएको डाटा वातावरणमा तपाईंको टीमहरू प Al्क्तिबद्ध गर्नुहोस्। सबै डाटा र निर्भरताहरूको समग्र दृष्टिकोण प्राप्त गर्नुहोस् ताकि सबैजनाको नयाँ औंलाको टिप्समा पछिल्ला सूचनाहरू छन्।
क्लाउडमा आत्मविश्वास र नियन्त्रण प्राप्त गर्नुहोस्
क्लाउड सेवाहरू मार्फत तपाईंको प्रोजेक्ट टीम र आपूर्ति श्रृंखला जडान गर्नुहोस्। आईटी अवरोधहरू कम गर्नुहोस्, ढिलो WAN प्रदर्शन मुद्दाहरू, स्केलेबिलिटी, र डेटा सुरक्षा।
अन्तमा, मेरो साथी र म सहमत थिए, एक शानदार बोतल पोर्टो मार्फत, कि महँगो पुन: प्रशोधन गर्नबाट बच्ने उत्तम तरिका भनेको आफैलाई डिजिटलाइज गर्नु हो। डिजिटलाइज्ड टेक्नोलोजी बिना, परियोजनाहरूले बहुमूल्य समय खेर फाल्नेछ (र त्यसकारण लागतहरू पनि आउँदछ) डिजाईन परिवर्तनका साथ आउँदै जाँदै।
किन तपाईं एक सही डिजाइन प्रक्रिया प्राप्त गर्न आवश्यक छ
सत्यको एकल स्रोत तपाइँको डिजाइन प्रक्रिया अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ यस परियोजनाको राम्रो डेलिभरीका लागि।
धेरै यात्रुहरू जस्तै म पनि इस्टन हुँदै लन्डन जान्छु। नयाँ स्थापना भएका ils330० माईलहरू निर्माण गर्ने योजनासहित, यस परियोजनाले मेरो लामो यात्रामा एकदम थोरै अवरोध पुर्‍याएको छ। प्रोजेक्ट बेंटलेको प्रोजेक्टवाइज प्रयोग गर्ने भएकोले मैले सोचें कि निर्माण भित्ताहरू पछाडि के भइरहेको छ।
यो बाहिर जान्छ कि त्यहाँ मानव अवशेष को 40,000०,००० भन्दा बढी सेट संग ठूलो चिहान छ जहाँ HS2 को Euston प्लेटफर्महरु एक दिन बसोबास गर्नेछ। के एक पटक सेन्ट जेम्सको बगैंचा कब्रिस्तान छिट्टै प्रवेशद्वार हुनेछ जहाँ रेलहरू लन्डन छोड्छन् र यात्री २२ 225 मील प्रति घण्टा सम्म यात्रा गर्न सक्दछन्।
Remains०,००० मानव अवशेषहरूको ट्र्याक राख्नु एचपी २ लाई लन्डन गेटवे बनाउनको तुलनामा यस महाकाव्य प्रोजेक्टको लागि सजिलो काम जस्तो देखिन्छ। डेलिभरी टोलीको प्रगति हुँदै जाँदा उनीहरूले बिस्तारै ग्राहक र डिजाइन टोलीले परियोजनाको फारम र कार्य सहित मूल डिजाइन मस्यौदा पूरा गर्नका लागि स्थापना गरेको डिजाईन आवश्यकताहरूको बारेमा बुझ्ने क्षमता विकास गर्नेछन्।
हालको इस्टन स्टेसनमा एक खडा यात्री भएकोले, सूचना प्यानल हेर्न चाहान्छ र ढिलाइ भएको ट्रेनलाई प्लेटफर्म दिनको लागि तिर्सना गर्दै, मलाई थाहा छ स्टेशनको कार्य गर्नको लागि कति परिवर्तन आवश्यक छ।
यस समयमा, डेलिभरी टीम डिजाइन डिजाइनको निर्माण र रेखाचित्रको गहिरो व्याख्या हुनको लागि आवश्यक पर्ने विकसित गर्न र विस्तार गर्न डिजाइन टोलीसँग मिलेर काम गर्दैछ।
जब दुबै टोली अगाडि बढ्छन्, यो आँधीबेहरी भन्दा पहिले शान्त छ, परिवर्तन र डिजाईन भिन्नताको चप्टी छालहरू भन्दा पहिले। डिजाइन पुनः डिजाइन, मुद्दाहरू र दायित्व कुनै पनि डिजाइन र वितरण टोली बीच गुट पैदा गर्न सक्छ।
यी समीक्षाले टोलीलाई सिर्जना र रेकर्ड गर्न लामो समय लिन्छ, साथै निराशा समीक्षा, अनुमोदन, र वितरणको लागि आपूर्ति श्रृंखला निर्देशन गर्न निराश।
यदि हामी कुनै प्रमुख पूर्वाधार योजना मात्र नभई कुनै पनि प्रोजेक्टको सुरूमा फर्कन्छौं भने ग्राहकले डिजाइन टोलीसँग संलग्न हुने छ र परियोजनाले वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकताको सारांश स्थापना गर्नेछ। त्यो सारांशमा, ग्राहकले धेरै कुञ्जी प्रदर्शन र आवश्यकताहरू स्थापना गर्दछ, जुन डिजाईनले पूरा गर्नुपर्दछ।
ग्राहकसँगको अन्तर्क्रियाले यी चार चरणहरू अनुसरण गर्दछ:
प्रोग्रामिंग / पूर्व डिजाइन चरण
निर्माण रेखाचित्र / ग्राफिक्स
मलाई अझै सम्झना छ जब मैले निर्माण व्यवसायमा सुरु गरेको थिएँ। त्यस पछि ग्राहकसँग यी कुराकानीहरू कागज मार्फत हुने थिए, कपेरहरूबाट अमोनिया गन्धले कोठा भरियो किनकि उनीहरूले प्याकेजहरू तयार पारे र तिनीहरूलाई आवश्यक शास्त्रीय ढ .्गमा तोडे। आज, यो डाटा र थ्रीडी मोडलहरू छन् जसले चीजहरूलाई बढी जटिल बनाउन सक्छ।
यद्यपि यी जटिलताहरूबाट बच्न एक समाधान छ। प्रोजेक्ट वाइज र सिन्च्रो जस्ता सफ्टवेयरले डिजाइन डेटालाई थ्रीडीमा निर्माण गर्न अनुमति दिन्छ नियन्त्रण र सहयोगी तरीकाले डाटा निर्माण र वितरण अघि। यो अभ्यासले सरोकारवालाहरु र सम्पूर्ण डिजाइन टोली बीचको सञ्चार सुधार गर्दछ, तर प्रत्येक प्रोजेक्टमा उपस्थित भिन्नताहरुको तनावलाई पनि कम गर्न सक्छ। हामी हाम्रो अध्ययनबाट जान्दछौं, साथै म्याकिन्से जस्ता कम्पनीहरूले गरेका ती पनि हुन् कि २०% सबै भन्दा ठूला परियोजनाहरू ओतप्रोत छन् र %०% ले बजेट भन्दा बढि छन।
यी भिन्नताहरूलाई नियन्त्रण र कम गर्न आवश्यक छ।
यदि डिजाइन त्रुटिहरू बनाइएमा, वर्तमान प्रणालीहरूले सजिलो बनाउँदछ कि त्रुटि सुधार गर्न। महत्त्वपूर्ण मापदण्ड यो हो कि परिवर्तनहरू र सूचनाहरू छिटो साझा हुन्छन्, वितरण टोली र यसको आपूर्ति श्रृंखलालाई त्यस्तो तरिकाले प्रतिक्रिया गर्न दिन्छ जुन साइटमा कम प्रभाव पार्दछ।
यदि हामीले पर्यावरण, खाद्य र ग्रामीण मामिला विभाग (डेफ्रा) को नवीनतम रिपोर्टमा ध्यान दियौं भने, निर्माण फोहोर अविश्वसनीय रूपमा उच्च छ र धेरै जसो कामकाजबाट आउँछ। यो अभ्यास अन्ततः पैसा, समय, र सामग्री बचत हुनेछ।
मोट्स म्याकडोनाल्डले यी सुविधाहरू देखेका थिए जब उनले थेम्स टाइडवे ईस्ट प्रोजेक्टमा आफ्नो कामको लागि सत्यको एकल स्रोत लागू गरे। नेतृत्व डिजाइनरको रूपमा, संगठनले लन्डनको खतरनाक पुरानो मलजल प्रणाली सुधार गर्ने लक्ष्य राख्यो। जटिल £ 4.000bn ($ 4.900bn) प्रोजेक्टको प्रबन्धको अतिरिक्त, मोट म्याकडोनाल्डलाई निर्धारित भन्दा दुई बर्ष अगाडि यसलाई वितरण गर्न चुनौती दिइयो। यद्यपि संगठनले सम्पूर्ण विस्तारित परियोजना टोलीमा सहज सहयोगको लागि अनुमति दिन सकेन भने यसले पछाडि झर्ने र महत्वपूर्ण माइलस्टोनहरू पूरा गर्न असफल हुने जोखिम निम्त्यायो।
सफल हुनको लागि मोट म्याकडोनाल्डले यो सुनिश्चित गर्नुपर्‍यो कि उनको सम्पूर्ण प्रोजेक्ट टीम, जसमा विभिन्न प्रकारका संगठनहरू, डिजाइन विषयहरू, र भौगोलिक स्थानहरूका सदस्यहरू सामेल छन्, व्यवस्थित वातावरणमा सजीलो अप-टु-डेट जानकारी पहुँच गर्न र आदानप्रदान गर्न सक्दछन्। मोट म्याकडोनाल्डले यस टोलीका सदस्यहरू सँगै ल्याएर र जडित डाटा वातावरणमा सामग्री डिजाइन गरेर यो समाधान पूरा गर्नुभयो। टोलीका १२ सदस्य डिजाइन वर्गका सदस्यहरूले अब हजारौं डेलिभरीहरू एकै ठाउँमा सिर्जना गर्न, परिमार्जन गर्न र भण्डार गर्न सक्नेछन्, युरोपभरि भाग लिने संगठनहरूले सजिलैसँग पहुँच गर्न सकिने ग्राहकहरू सहित समीक्षा र अनुमोदनहरूको लागि।
प्रोजेक्ट सहकार्यलाई सुव्यवस्थित गरेर, मोट म्याकडोनाल्डले समय भन्दा पहिले ग्राहकलाई राम्रो गुण प्रदान गर्‍यो र महसुस भयो कि त्यहाँ छन्:
डिजाइन उत्पादन समयमा 32% बचत
Project०% कागजातहरू र सबै परियोजना सहभागीहरूले विश्वासमा छिटो पहुँच
पहिलो पटक ग्राहकको प्याकेजको% 76% स्वीकृति।
कम्प्युटरहरूले डिजाइन प्रणालीहरूको तनावलाई हटाउँदा, प्रोजेक्टवाइजहरू र सिन्च्रो जस्ता अनुप्रयोगहरूले तपाईंलाई समयको बचत गर्न र सत्यको एकल स्रोत स्थापित गरेर प्रोजेक्ट जानकारी व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्दछ कि अप-टु-डेट जानकारी सुनिश्चित गरेर जोखिम कम गर्न। ट्र्याक गरिएको, व्यवस्थित र तपाईंको परियोजना मार्फत पहुँचयोग्य। सफ्टवेयरको साथ टोलीको सहकार्यको गतिले तपाईंको टोलीलाई जोडिएको डाटा वातावरणमा प al्क्तिबद्ध गर्न मद्दत गर्दछ। यसले उत्पादकता सुधार गर्नेछ र सुनिश्चित गर्दछ कि जानकारी ट्र्याक गरिएको छ र सहयोगी कार्यप्रवाहको माध्यमबाट व्यवस्थित गरिएको छ।
उत्तम प्रोजेक्ट ब्यबश्थापनले अधिक समयमै र सूचित निर्णयहरूको लागि राम्रो अन्तरदृष्टि निम्त्याउन सक्छ। यसले तपाईंलाई समग्र पारदर्शिता बढाउँदै यस प्रोजेक्टमा हुने सम्भावित अवरोधहरू पार गर्न अनुमति दिनेछ। कमन्स सार्वजनिक लेखा समितिले भर्खरको क्रसरेल रिपोर्टले ठेकेदारको व्यवस्थापनको बारेमा परियोजनाको आलोचना गरेपछि यो स्पष्ट छ कि नयाँ ईस्टन र एचएस २ रेल स्टेशन सहित सबै परियोजनाहरुमा स्पष्टताको आवश्यकता रहेको छ। ।
कसरी सत्यको एकल स्रोतले पूर्वाधार डिजाइन उद्योगलाई रूपान्तरण गर्न सक्दछ
यति धेरै डाटा इनपुटहरू र सेन्सरहरूको साथ, डिजाइनरहरू र ठेकेदारहरूलाई सत्यको एकल स्रोत प्रयोग गर्न यो कहिल्यै महत्त्वपूर्ण भएको छैन।
भर्खरै न्यूयोर्क शहरमा, हामीले 30% ले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने बोलीको रूपमा गिलास गगनचुम्बी भवनहरूको निर्माणमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ भनेर थाहा पायौं। मेयर बिल डे ब्लासियोले भने कि सिसाको अगाडिको गगनचुम्बी भवनहरू "अविश्वसनीय रूपमा अक्षम" छन् किनभने धेरै ऊर्जा गिलासबाट बाहिर निस्कन्छ।
डी ब्लासियोले नयाँ विसाधन गगनचुम्बी भवनहरूको निर्माणमा प्रतिबन्ध लगाउने र विद्यमान गिलास भवनहरूलाई नयाँ र कडा कार्बन उत्सर्जन दिशानिर्देश पूरा गर्न आधुनिक बनाउनुपर्ने विधेयक पेश गर्ने योजना बनाएको छ।
डिजाइन समुदाय मा दबाब अब अधिक ठूलो छ। हामीले धेरै पटक देख्यौं कि आजको डिजाइन परियोजनाहरू पहिलेभन्दा धेरै जटिल र माग भएका छन्। यद्यपि शहरका मेयरहरूले डिजाइन र कार्यसम्पादनको बारेमा बढ्ता आवाज गर्दै छन् जसमा लन्डनका मेयर सादिक कानले फोस्टर + पार्टनर्स द्वारा डिजाइन गरिएको नयाँ नयाँ गगनचुम्बी भवनहरूको योजना अस्वीकार गरेका छन्, डिजाइनरहरू टेबमा फर्किनु पर्छ। डिजाईन गर्न डिजाइन जुन केवल सौन्दर्य तरिकाले मात्र आवश्यक छैन तर सामाजिक र वातावरणीय पनि हो
डि ब्लासिओको सम्भावित बिलको साथ, हामी हाम्रा प्रोजेक्टहरूमा सेन्सरहरूको विश्वव्यापी वृद्धि देख्न सक्छौं, जुन डिजिटल जुम्ल्याहा र प्रदर्शन जुम्ल्याहाहरूका लागि रोचक समाचार हो। यद्यपि डिजाइन र वितरण टोलीलाई आवश्यक ज्ञान नयाँ प्रविधि अनुगमन गर्न एकदम दृढताका साथ अघि बढेको छ। यी परियोजनाहरू आकार र जटिलतामा बढ्दै जाँदा, डेलिभरी टीमको आकार पनि बढ्छ। सबै रेखाचित्र ट्र्याक गरेर, सूचना प्याकेजहरू परियोजना भन्दा अधिक जटिल हुन सक्छ।
प्रोजेक्टको प्रारम्भिक चरणबाट परियोजना डिजाइन प्रबन्धनको ठूलो आवश्यकता छ, टोलीलाई सूचना कार्यप्रवाहको जारी नियन्त्रण गर्न अनुमति दिँदै। डाटाको ठूलो मात्राको साथ अब एक परियोजनामा ​​संलग्न छ, अनुकूलित सत्यको एकल स्रोतको लागि आवश्यक छ। तपाईं यी शीर्षकहरूको बारेमा मेरो डाटा सिलोसमा अघिल्लो लेखहरू पढ्नुभयो भने (किन तपाईं ट्रुवर प्रोजेक्ट मोनिटरिंगको लागि डाटा सिलोसबाट टाढा रहनु पर्छ) र ठूलो डाटा (बिग डाटाको साथ डिजिटाइजिंग) पढ्न सक्नुहुन्छ। सत्यको यो एकल स्रोतले अनुबन्धित प्रक्रियाहरूका साथ प while्क्तिबद्ध गर्दा सबै प्रोजेक्ट कार्यप्रवाहहरू प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ। यी कार्यप्रवाहहरू परिवर्तन अनुरोध वा साधारण विविधतासँग सम्बन्धित हुन सक्दछ। यी प्रत्येक कागजातको पालना गर्न यसको आफ्नै मार्ग हुनेछ र यसको समापन पूरा भयो।
निर्माण उद्योगलाई पहिले नै सूचनाको एकल भण्डार, सत्यको एकल स्रोत सिर्जना गर्न भनिएको छ। बेलायतमा, सरकारले उद्योगलाई 'डेटाको सुनौलो धागो' प्रदान गर्न दबाब दिइरहेको छ, जसको अर्थ प्रत्येक भवनमा सबै सम्पत्तिहरूको डिजिटल रेकर्ड हुनुपर्छ। डिजाइन र डेलिभरी टोलीका धेरै व्यक्तिहरूलाई डेटा सङ्कलन गर्न भनिएको हुनाले, डेटाको यो मात्रालाई नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका भनेको धेरै स्पष्ट र राम्ररी परिभाषित कार्यप्रवाहहरू प्रयोग गरेर अनुबंधात्मक नियन्त्रणहरू मार्फत हो।
खुला र जडित डाटा वातावरण प्रयोग गर्नु आवश्यक छ किनकि यसले टोलीलाई सबै डाटा प्रबन्ध गर्न एकल साइन-इन दिन्छ। यो जहाँ प्रोजेक्टवाइज-आधारित बेन्टले जडित डाटा वातावरणले डेटा नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ र त्यसपछि सत्यको एकल स्रोत प्रदान गर्दछ, जबकि दैनिक प्रयोगको लागि अत्यन्त लचिलो भएको छ।
जडित डाटा वातावरण कुनै पनि परियोजनाको लागि कुञ्जी हो। यसले तनाव कम गर्दछ र टीमलाई सबै आवश्यक जानकारीमा पहुँच दिन्छ, यो डिजाइन मुद्दाहरू, RFIs, परिवर्तन अनुरोधहरू वा अनुबंध कागजातहरू। यो जानकारी साधारण पीडीएफ पाना वा थ्रीडी मोडेलको रूपमा हेर्न सकिन्छ।
स्थापित कार्यप्रवाहहरूको प्रयोग गरेर, टोली सदस्यहरूले स्वचालित रूपमा निर्णय प्रक्रियामा आवश्यक पर्ने डिजाइन परिवर्तनहरू देख्नेछन, तिनीहरूलाई छिटो त्यो निर्णयको लागि अनुमति दिदै।
क्लाउड-आधारित प्रणाली प्रयोग गर्नु भनेको टिमलाई सबै कागजातमा पूर्ण पहुँच छ, या त साइटमा मोबाइल उपकरण मार्फत वा अफिसमा डेस्कटप कम्प्युटरबाट। यस क्षमताले सबैलाई परियोजनाको प्रगति बारे पूर्ण जानकारी दिन्छ।
सत्यको एकल स्रोत प्रयोग गर्दा त्रुटिहरूको संख्या कम गर्दछ जब एक प्रणालीबाट अर्कोमा डाटा सारियो। यस सुविधाले साइटमा त्रुटिहरूको कारणले गरिएको rework को मात्रा कम गर्दै सहि जानकारीका लागि खोजी गर्न खर्च गरेको समय पनि कम गर्दछ।
आवश्यक कार्यप्रवाह परियोजनादेखि परियोजनामा ​​फरक हुनेछ, अनुबंधका आवश्यकता र ग्राहक सञ्चार अनुरोधहरूको कारण। त्यसकारण, यी कार्यप्रवाहहरूको सिर्जना सरल र लचिलो हुनुपर्दछ कि एक कम्पनीको रूपमा, तपाईं आफ्नो उत्तरदायित्वलाई तार्किक ढाँचामा राख्न सक्नुहुन्छ। प्रोजेक्टवाइज जस्ता प्रणाली प्रयोग गर्नाले राम्रो दृश्यता र नियन्त्रणित वर्कफ्लो दिनेछ। त्यसकारण, कुञ्जी र महत्वपूर्ण डाटा प्रदान गरेर, अनुमान र संघर्ष हटाइनेछ
एक संस्थाको उदाहरण जसले प्रोजेक्ट वाइजलाई राम्रो दृश्यता र नियन्त्रित कार्यप्रवाहको लागि प्रयोग गर्‍यो ड्र्यागडोस एसए र लन्डन भूमिगत लिमिटेड बीचको सहकार्य हो।
यस संस्थाको परियोजनाको सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मामा थिए .6.07.०XNUMX बिलियन जीबीपी ($ .7.42..XNUMX२ बिलियन) बैंक-स्मारक स्टेशनका लागि, बेलायतको सबैभन्दा जटिल भूमिगत रेल प्रणाली मध्ये एक।
सफल हुनको लागि, ड्र्यागाडो र लन्डन भूमिगत परियोजना साझेदारहरूको विशाल नेटवर्क प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ, 425२XNUMX प्रयोगकर्ताहरू समावेश गरे व्यक्तिगत Different० बिभिन्न कम्पनीहरू, यो सुनिश्चित गर्न को लागी हजारौं डिजाइन उत्पादहरु को निर्माण, समीक्षा र अनुमोदन बिना घटना भयो।
.6.07.०7.42 बिल जीबीपी (.XNUMX..XNUMX२ बिल बिल)
छुट्याउन सकिने डिजाइनहरूको हजारौं प्रभावकारी बनाइयो, पुन: अवलोकन गरियो र अनुमोदन बाहेक अनुमोदन गरियो
बेंटले डिजिटल आकलन लिनुहोस् र तपाइँ कसरी आफ्नो व्यवसाय मा प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस्।
लेखक | कोक मार्क गर्नुहोस्
निर्देशक औद्योगिक मार्केटि and र परियोजना डेलिभरी
बेंटले प्रणाली ईन्जिनियरहरू, आर्किटेक्टहरू, जियोस्पाटियल पेशेवरहरू, निर्माणकर्ताहरू, र पूर्वाधार डिजाइन, निर्माण, र अपरेशनहरूको लागि मालिक-अपरेटरहरूको लागि सफ्टवेयर समाधानहरूको विश्वको अग्रणी प्रदायक हो। बेंटलेको माइक्रोस्टेशन-आधारित ईन्जिनियरिंग र बीआईएम अनुप्रयोगहरू, र यसको जुम्ल्याहा क्लाउड सेवाहरू, अग्रिम परियोजना डेलिभरी (प्रोजेक्टवाइज) र यातायात र अन्य सार्वजनिक काम, उपयोगिताहरू, औद्योगिक र उर्जा संयंत्रहरूको सम्पत्ति प्रदर्शन (एसेटवाइज) संसाधन, र वाणिज्यिक र संस्थागत सुविधा।
बेंटले प्रणालीले 3,500,,700०० भन्दा बढी सहकर्मीहरूलाई रोजगार दिन्छ, १ 170० देशहरूमा वार्षिक revenue०० मिलियन डलर कमाउँछ, र २०१ 1 पछि अनुसन्धान, विकास र अधिग्रहणमा १ अर्ब डलर भन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ। सन् १ 2014 in in देखि यस कम्पनीले बहुमतको स्वामित्वमा रहेको छ। बेंटलेका पाँच संस्थापक भाइहरू। बेंटले सेयरहरू NASDAQ निजी बजारमा आमन्त्रित गरेर हुन्छन्।
डिजिटल शहरहरू - हामीले कसरी SIEMENS ले प्रस्ताव गर्ने प्रविधिहरूबाट फाइदा लिन सक्छौं
विनाशकारी 2009 Inspired